चुनौतीलाई फेस गर्न मन पर्छः बाँके प्रजिअ कुरुमाबाङ्ग « Etajakhabar
चुनौतीलाई फेस गर्न मन पर्छः बाँके प्रजिअ कुरुमाबाङ्ग
प्रकाशित मिति : ७ असार २०७७, आईतवार १०:५३
रुपनि जि.एम, बाँके । कोरोनाको कारण नेपालमा लकडाउन लागेको आज ८५ दिन भएको छ । यस्तो अवस्थामा कोभिड १९ ले प्रत्यक्ष फिल्डमा खटेर काम गर्नेहरुलाई यस्ले कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने विषयमा ताजाखबरले विभिन्न व्यक्तिहरुसंग कुरा गरेको छ । सोही कुराकानीकै क्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्बाङ्ग भन्छन्,‘लकडाउनकै कारण परिवारसंग भेट गर्न नपाएको ४ महिना भयो । हालखबर बुझ्नकैलागी घरबाट दिनमा ४÷५ चोटी फोन आएकै हुन्छ । नेपालगञ्ज कोरोनाको डेन्जर जोनमा परेको भएर पनि होला म बाँके आएदेखि त झनै धेरै फोन आउने क्रम बढि रहेको छ । घर जान नपाएपनि फोनबाट कुराकानी र भिडियो कलमा देखादेख भई रहने हुनाले लाग्ने गरेको न्याश्रो पन पनि मेटिएको हुन्छ ।’
प्रजिअ कुरुम्बाङ्ग नेपालगञ्ज जानु पुर्व बाँकेका विभिन्न गाउँपालिका र वडाहरुमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढिसकेको थियो । त्याहाँको अवस्था अति धेरै नै नाजुक हुँदै गएको हुनाले र त्याहाँ स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउनकोलागी पनि च्यालेन्ज धेरै भएको हुनाले । ती सबै कुरासंग निडर भएर फेस गर्न सक्ने एउटा कर्मठ र योग्य कर्मचारी सम्झिएर बाँकेमा उनलाई सरुवा गरियो होला भन्ने उनलाई लाग्छ । उनी भन्छन्,‘म जुनसुकै परिस्थितीमा पनि नडर भएर काम गर्न मन पराउँछु । म आफुलाई एउटा कर्मठ र योग्य कर्मचारी भन्न रुचाउँछु । मैले काम गरेका अन्य जिल्लाहरुमा पनि मेरो पहिचान यही अनुरुप नै भएकोले पनि होला गृहमन्त्रालयले मलाई यसरी नै जानेर अनि बुझेर हुन सक्छ बाँके सरुवा गरेको ।’
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको कोहलपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहीबार मृत्यु भएकी कैलालीकी कोरोना सङक्रमित महिलाको शव बर्दियाको मानखोलास्थित ढकेरी जङ्गलमा व्यवस्थापन गर्दै नेपाली सेनाको टोली । सो अवसरमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ र नेपाली सेनाका कर्णेल नकुल थापाको पनि सहभागिता थियो । तस्वीरः मेनका चौधरी
प्रजिअ कुरुम्बाङ्गका अनुसार बाँके जानासाथ उनले शरुमा अति उच्च जोखिममा परेको संक्रमित गाउँपालिका र वडाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेर काम शुरु गरें । क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरुको उच्च मनोबल बढोस् भन्नकोलागी उनले ४१ वटा क्वारेन्टाईनको त आफैं नै प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको पनि बताए । कुराकानीकै क्रममा उनले त्यसरी काम गर्ने क्रममा आफुले पहिलो प्रथमिकता महिला, त्यसमा पनि गर्भवती महिला, बृद्ध महिला र बालबालिकाहरुलाई विशेष ध्यानमा रोखेर उनीहरुलाई आफ्नै घरमा पनि क्वारेन्टाईनमा बस्नकोलागी सल्लाह दिएको बताए ।
काम गर्ने शैली र ढाँचा सबैको एउटै नहुने बताउँदै प्रजिअ कुरुम्बाङ्ग भन्छन्,‘अरुको तुलनामा मेरो काम गर्ने र गराउने तरिका फरक छ । त्यसैले मैले यो क्वारेन्टाईनको समयमा र नेपालगञ्ज कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको ठाउँको हिसाबमा मैले सिमाबाट प्रवेश गर्नेहरुलाई राखिएको क्वारेन्टाईनमा पनि विशेषगरी महिलाहरुको अवस्था बुझेर उनीहरुको आरडिटी जाँच गरेर अनि त्यसको रिजल्ट अनुसार घरमै क्वारेन्टाईनमा बस्न भनेर हामीले छोडेका पनि छौं । र त्यसको फलोप पनि मेरै नेतृत्वमा हामीले मिलेर गरिरहेका छौं ।’
‘अरुको जिल्लाको तुलनामा बाँकेमा व्यवस्थापनकोलागी चुनौति निकै नै छ । तर पनि देश र जनताकोलागी काम गर्न भनेर घर छोडेको हुनाले डटेरै भएपनि काम त गर्नै पर्ने हुन्छ ।’ कुरुम्बाङ्ग भन्छन्,‘यो महामारीको माहोल भएर पनि होला । मलाई पहिलाको तुलनामा निन्द्रा अलि कम लाग्ने गरेको छ । बिहान बिस्तारमा आखाँ खुल्ने बित्तिकै आजको काम कसरी गर्ने होला ? भनेर चिन्ताले त्यतिबेलादेखि नै सताउन थाल्छ । र राति ननिदाउँदासम्म अनौपचारिक भएपनि मोबाईलबाटै भोलीको सेड्युल तयार गरिन्छ । दिन भरिको दौडधुप त छँदै छ । त्यसमाथि यहाँको गर्मी अनि त्यही गर्मीमा क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरुको म्यानेजम्यान्टदेखि लिएर फिल्ड भिजिट, आगामी कार्यक्रमकोलागी रणनीति आदि ईत्यादिमा गरिने प्रत्येक घण्टाको बैठक । यी र यस्तै कुराहरुले गर्दा पनि होला म यहाँ आएदेखि मिठो निन्द्रा निदाउनै पाएको छैन ।’
ताजा खबरसंग प्रजिअ भएर जिल्लाको जिम्मेवारीको विषयमा कुरा गरि रहंदा उनले आफ्ना व्यक्तिगत भावनाका कुराहरु पनि अभिव्यक्त गरेका छन्,‘मान्छे हुँ म पनि यस्तो बेला डर लाग्नु स्वभाविक नै हो । मलाई पनि लाग्छ । तर देश र जनताकोलागी काम गर्न हिंडेको कर्मचारी भएको नाताले डरलाई पञ्छाएर आत्माविश्वासलाई दहरो बनाएरै भएपनि फिल्डमा खटिएकै छु । म आफैं पनि फिल्डमा खटेर काम गर्ने हुनाले संक्रमित हुन्छु कि भनेर डर लाग्ने कुरा त झनैं बढेर आउँछ । तर म नै डराएँ भने मैले जिम्मेवारी पाएको मेरो जिल्लाका जनताहरुको के हालत होला भन्ने लाग्छ । यति खेरको यो समय भनेको त झनै कोरोनाले सबैको मनमा डरको वातावरण कायम गराएको समय हो । यस्तो बेलामा म एउटा प्रशासकिय अधिकृत भएर डराउन हुँदैन भन्दै आफुले आफुलाई नै काउन्सील गरिरहेको हुन्छु ।’
बाँके भन्दा अघि ८ वटा जिल्लाको सिडियो भएर काम गरि सकेका प्रजिअ कुरुम्बाङ्गको बाँके अहिले ९ औं जिल्ला हो । बाँकेमा लकडाउन, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनक, त्यसैगरी सामाजिक सदभावका कुराहरु, खुला बोडर भएको हुनाले होल्डिङ्ग सेन्टरको व्यवस्थापन लगाएतका थुप्रै समस्याहरु भएको बताउने कुरुम्बाङ्गले यिनै र यस्तै बाँकेका विभिन्न समस्याहरुलाई समाधान गर्नकोलागी अरुको तुलनामा आफुलाई अलि बढी अनुभव भएको भन्ने मुल्याङ्कन गरेर गृह मन्त्रालयले पठाएको हो कि भन्ने मैले महसुस आफुले गरेर नै डटेर काम गर्ने हौसला मिलेको पनि बताउँछन् ।
प्रजिअ कुरुम्बाङ्ग भन्छन्,‘ अहिलेको परिवेशमा मैले भोगेको भोगाईको बारेमा भन्नु पर्दा बाँकेमा काम गर्न सहजता भन्दा पनि जटिलता बढी छ । तर जटिलता छ भन्दैमा हामी जस्तो राष्ट्र सेवकले हात बाँधेर काम गरेको जस्तो गर्न मिल्दैन । यस्तो बेलामा घर परिवार सम्झिने हो भने उनीहरुको ईमोसनले काम गर्न दिंदैन । त्यसैले मैले ती सबै कुरा बिर्सिएर आफुलाई काममा फोकस गरिरहेको हुन्छु । घरबाट फोन आउँदा मात्रै ओहो ! मेरो परिवार छ भन्ने आभास हुन्छ मलाई । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थकोलागी म अहिलेसम्म हिंडेको पनि छैन र हिंड्ने पनि छैन । म एउटा प्रशासनिक अधिकृत भएको हुनाले मैले यस क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यान दिनै पर्छ । त्यस अर्थमा म रातदिन नभनेरै खटिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले म आफैं फिल्डमा खटिएकै हुन्छु ।’